ขายอาคารพาณิชน์4ชั้นครึ่ง ตรงข้ามเอื้ออาทรศาลายา | DDHomeLand
โดย วิสูตร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ6ต.ค. 2554.
อาคารพาณิชย์ 1 คูหา4ชั้นครึ่ง หน้ากว้าง4เมตร ยาว 19 เมตรต่อเติมใหม่พื้นที่ด้านหลัง และชั้นลอย เต็มพื้นที่ พื้นที่ใช้สอย 380 ตร.เมตร ติดมุ้งลวดเหล็กดัด ตบแต่งเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
อยู่ติดถนนศาลายา-นครไชยศรี ตรงข้ามโครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 1-2-3-4 โดยรอบมีตลาดนัดแทบทุกวัน ใกล้สถานีรถไฟวัดสุวรรณ โรงงานเซรามิค โรงงานยาเกรทเตอร์ฟามาร์ เซเว่น โลตัส อยู่ระหว่างตลาดศาลายากับอำเภอนครไชยศรี เข้าออก ได้หลายทาง รถประจำทางที่ผ่านมี รถเมล์ ขสมก. 84ก ปอ.515 (อยู่ระหว่างขยายเส้นทางอีกหลายสาย) รถสองแถววิ่งระหว่างตลาดศาลายาและอำเภอนครไชยศรี มีห้องน้ำทุกชั้น ติดกันสาดแมททอล
สนใจติดต่อ วิสูตร 086-984-5445
ติดต่อ: วิสูตร อีเมล์:
โทรศัพย์: 086-9845445,086-9845445 จังหวัด: นครปฐม
คำค้น: চুদাচূদী | ​အောစာအုပ်​အလန်​ | ซื้อบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ถ ราษฎร์อุทิศ คู้ขวา มีนบุรี | မိုးဟေကို playlist | ကာမစာ​အုပ်​ | ကာမစာ ပေ | ကာမစာ​ပေ | tzမြန်မာအောစာအုပ် | သေအောင်လိုး | သေအောင်လိုး |
တအားလိုး ကြီး​ဒေါ် လိုး ကြီး​ဒေါ် လိုး ကာမဖီလင် အန်တီလေး ကာမဖီလင် အန်တီလေး load heedek load heedek လိုးနည်း မှုတ်နည်း လိုးနည်း မှုတ်နည်း pdfအပြာစာ pdfအပြာစာ babamayerchoti Tinttinttunကာမရသ babamayerchoti Tinttinttunကာမရသ ယောက္ခမ လိုး ယောက္ခမ လိုး แบบสร้างบ้านชั้นเดียว ​ဒေါက်​တာချက်​ကြီးအပြာစာအုပ်​ แบบสร้างบ้านชั้นเดียว ​ဒေါက်​တာချက်​ကြီးအပြာစာအုပ်​ ဇွန်သင်ဇာ ဖင် ဇွန်သင်ဇာ ဖင် မြန်​မာ့ဖင်​အိုး မြန်မာ ဖာသယ်မလေးများ စောက်ဖုတ် ရုပ်ပြ boby soxer စဖုတ် မြန်မာ့ အပြာစာ မြန်​မာ့ဖင်​အိုး မြန်မာ ဖာသယ်မလေးများ စောက်ဖုတ် ရုပ်ပြ boby soxer စဖုတ် မြန်မာ့ အပြာစာ boby soxer လိုး boby soxer လိုး မြန်​မာ အဖုတ်​ ထိုင်းဖူးကား မြန်​မာ အဖုတ်​ ထိုင်းဖူးကား บ้านแฝดเสรี ทิพมาศ